१.१ चीनको क्रान्ति, १९११
चीनको क्रान्ति, १९११सम्पादन
सन् १९१२ फेब्रुअरी १२ मा मन्चु वंशको अन्त्य र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको थालनी भएपछि युआन–सिह–काई देशको राष्ट्रपति बने । गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएन । युआन–सिह–काईले तानाशाहका रूपमा देशको शासन चलाउन लागे। उनी निकै ठुलो धोकेवाज र स्वार्थी व्यक्ति थिए। उनले आफैलाई चीनको सम्राट घोषणा गर्ने योजनासमेत बनाए। तर यो योजना सफल हुन भने सकेन। राजनीतिक स्थिरता कायम गरी सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्नु देशको प्रमुख आवश्यकता थियो। त्यसैले डा. सन यात्सेनले तुङ मिङ हुईलाई समेत मिलाएर “कोमिन्ताङ” भन्ने अर्को पार्टीको स्थापना गरे। यता युआन–सिह–काईको सर्बैसत्तावाद विरुद्ध आन्दोलनको थालनी गरे। सन् १९२१ मा पेकिङ राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका १२ जना विद्यार्थीहरू मिलेर “कुङ चाङ तन” को स्थापना गरे। “कुङ चाङ तन” भनेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो र यो साम्यवादी दल थियो। यी १२ जनाहरूमध्ये माओत्से तुङ पनि एक थिए। उता डा. सन यात्सेनले रुसका शासक भ्लादिमिर लेनिनसँग सम्पर्क गरेर कोमिङताङलाई साम्यवादी सिद्धान्तकै पार्टीमा परिणत गरे र “च्याङ–काइ–सेक”लाई “लाल सैनिक” को सङ्गठन गर्ने जिम्मेवारी दिए। सन् १९२५ मा डा. सन यात्सेनको मृत्युपछि कोमिङताङको जिम्मेवारी च्याङ काई सेकको काँधमा आयो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कोमिङताङको संयुक्त पहलमा सन् १९२६ मा सैनिक शासकलाई पराजित गरियो र च्याङ काइ सेकले चिनियाँ सरकारको नेतृत्व गरे ।
जनवादी क्रान्तिका कारणहरूसम्पादन
च्याङ काई सेकको नीतिसम्पादन
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिकासम्पादन
जापानसँगको युद्धमा पराजयसम्पादन
मुद्रास्फिती र महङ्गीसम्पादन
भ्रष्टाचार र कालोबजारीसम्पादन
निश्चित वर्गको एकाधिकारसम्पादन
माओत्से तुङको नेतृत्व र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमसम्पादन
तत्कालीन कारण: लाल सेनामाथि राष्ट्रिय सेनाको आक्रमणसम्पादन
राजनीतिक संयन्त्रको निर्माणसम्पादन
भूमिसुधार योजना कार्यान्वयनसम्पादन
धर्मनिरपेक्ष राज्यको निर्माणसम्पादन
शिक्षा र साहित्यसम्पादन
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=चीनको_जनवादी_क्रान्ति&oldid=1035470" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १९ सेप्टेम्बर २०२१, २१:४४
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:४४, १९ सेप्टेम्बर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।